Bubata Fromgbọala Site USA na UK | Importgbọ M Mbubata
Bubata ma debanye aha ụgbọ ala gị na UK ANY DE NA-EME ELỌ ỌR FROM NA Mba Ọ bụla Ownzọ nyocha anyị nke IVA Usoro kachasị ọsọ nke ule na ndebanye aha na UK Njedebe na Ọrụ SITE BIC N'TOLỌ N'UKLỌ NCHE UK, Anyị na-ejikwa usoro dum Afọ 30 nke Ahụmịhe IHE ỌM ,MA, ỌKA NA ỌR AND 6000 + arsgbọ ala batara SITE SUPERCAR NA SUPERMINI - ANYRE NA-EGO!
Na-achọ ibubata ụgbọ ala si USA banye United Kingdom?
Anyị na-ejikwa usoro dum nke ịbubata ụgbọ ala site na USA, gụnyere ịgbanye ụgbọ mmiri, mbupụ, mbupu, mkpochasị ala, ngwongwo ndị dị na UK, mgbanwe ọkụ, nnwale nnabata na ndebanye aha DVLA. Anyị na-edozi usoro ahụ dum, na-azọpụta gị oge, nsogbu na ụgwọ a na-atụghị anya ya.
Inland USA Transportgbọ njem nke ụgbọ ala
Ndị ọrụ anyị nke US, ndị anyị mebere mmekọrịta siri ike, ga-ahazi mkpokọta ụgbọ ala gị na adreesị gị ma ọ bụ adreesị nke onye ị zụtara ya n'ime ụbọchị ole na ole ịdenye aha.
N’oge ọ bụla ụgbọ gị na-agagharị, a na-enyocha ya dị ka usoro na ọnọdụ anyị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla egbula oge ị ga-enweta aka, mana anyị na-ebugharị ọtụtụ puku ụgbọ ala kwa afọ na-enweghị nsogbu ọ bụla biko biko nwee obi ike na anyị ejiri ogologo oge chọta ndị mmekọ logistic tụkwasịrị obi.
Anyị na-enye ọrụ ụgbọ njem emechiri emechi ma ọ bụ mepere emepe iji mezuo ihe niile achọrọ na mmefu ego. Mgbe ahụ, anyị ga-ebuga ụgbọ ala ahụ n'ọdụ ụgbọ mmiri kacha nso ma ọ bụ Oakland, Houston, Savannah ma ọ bụ New York.
ụgbọ ala Ibu & Mbupu
Mgbe gị ụgbọala mbata na anyị na-ebusa, anyị ga-ahụ mara ya n'ime ya mbupu akpa na ike na-elekọta ma na anya. Ndị ọrụ aka anyị nọ na USA abụrụla akara aka n'ihi ahụmịhe ha na nlebara anya nke ọma mgbe ha na-azụ ụgbọ ala.
Ọ bụrụ na ịchọrọ inwekwu mmesi obi ike, anyị na-enye mkpuchi mmiri nke na-ekpuchi ụgbọ ala gị ruo uru zuru oke ya. Na ahụmịhe anyị, enwebeghị nsogbu ọ bụla nke mere ka ndị ahịa tufuo ụgbọala.
Mbupu ụgbọ ala nwere ike ịba ụba, ọkachasị si America. Na West Coast ọ nwere ike iwe obere oge karịa East Coast na anyị ghọtara na n'oge a, ọ ga-abụ na ị ga-achọsi ike ịmara na ọ dị mma site n'ọnụ ụzọ ámá nke ọdụ ụgbọ mmiri, kpochapụ site na omenala, ma ọ bụ na ụzọ anyị ogige.
Ozugbo ụgbọ gị adịghịzi n'aka gị, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ lọjistik na-echekwa ọbụna mmiri. Yabụ nke a bụkwa udo nke uche ọzọ anyị nwere olile anya na-enyere gị aka inwe ntụsara ahụ karịa inyepụ igodo ụgbọ ala America gị.
Mgbe ị na-ebubata ụgbọ ala site na America gaa UK, ịnwere ike ịme ya kpamkpam ụtụ isi ma ọ bụrụ na ịnwee ụgbọ ala ahụ opekata mpe ọnwa isii ma biri na mpụga EU ihe karịrị ọnwa 12.
Ọ bụrụ na njirisi ndị a anaghị emetụta mgbe ahụ ụgbọ ala wuru na EU ga-akwụ ụgwọ ọrụ 50 na 20% VAT, dabere na ego ị kwụrụ maka ụgbọ ala ahụ, ndị wuru na mpụga EU na-abata na 10% ọrụ na 20% VAT.
Imirikiti ụgbọ ala ndị karịrị 30 afọ ga-eru maka 5% mbubata VAT na enweghị ọrụ mgbe a na-ebubata, na-enye na ha agbanweela nke ukwuu site na ojiji mbụ ha ma achọghị ka ọ bụrụ onye ọkwọ ụgbọ ala gị kwa ụbọchị.
Ule na mgbanwe
Mgbe ị batara na UK, ụgbọ ala gị ga-etinye ọtụtụ ule na mgbanwe iji hụ na ọ ruru ụkpụrụ ụgbọ ala UK.
Mgbanwe ndị kachasị gụnyere mgbanwe na mgbaàmà, igwe ojii na ọkụ ọkụ na ụgbọ ala. Carsgbọ ala ndị arụpụtara nke United States na-enwe ihe ngosi agba agba dị iche iche, nke a na-etinyekarị n'ime bọlbụ ọkụ breeki. Ha nwekwara ọkụ dị iche iche na-acha agba dị iche iche na ụgbọ ala anaghị enwe ihe ngosi n'akụkụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ.
Anyị ga-agbanwe ụgbọ ala gị na ụkpụrụ UK site na iji teknụzụ ọkụ ụlọ na-adịbeghị anya, na-enye anyị ohere iji mezue mgbanwe niile na obere mmetụta mara mma site na ndị ọkachamara ruru eru nke ukwuu.
ụgbọ ala ndị si na USA na-erubeghị afọ iri ga-enwerịrị ike ịnwale ule IVA tupu DVLA ga-akwado ndebanye aha gị. Dị ka naanị ụlọ ọrụ dị na UK nwere ụzọ nyocha IVA na-arụ ọrụ naanị maka ụgbọ njem ndị DVSA kwadoro. Oge ọ na-ewe iji mezue atụmatụ a nke ibubata ngwa ngwa dị ka ụgbọ ala gị agaghị ahapụ saịtị anyị ma anyị anaghị edobe oge nchere gọọmentị.
Achọghị ule IVA maka ụgbọ ala gafere afọ iri, agbanyeghị na ọ ga-agafe MOT ka ọ ga-abụrịrị nke kwesịrị n'okporo ụzọ gbasara ọkụ mgbaàmà, akwa taya, nkwusioru na brekị, nke anyị ga-enyocha n'ezie, iji bụrụ ekwesiri ka ebugharị ya n'okporo ụzọ UK.
Anyị enweela ihe ịga nke ọma na-eme ka ndị ahịa anyị nwee ohere ịnweta nke MV nke Akaụntụ Akaụntụ M Aka Mbubata, nke pụtara na ị gafere ule gị nwere ike ịnwe nnabata ngwa ngwa karịa ebe ndị ọzọ.
Mgbe ahụ, anyị dabara akara ọhụrụ UK gị ma nwee ụgbọ ala dị njikere maka mkpokọta ma ọ bụ nnyefe na ebe ị họọrọ.
Ego ole ka ọ na-eri iji bubata ụgbọ ala si USA gaa UK?
Anwa ịbubata ụgbọ ala gị mana ịchọrọ echiche ego ole ọ ga-eri?
Ọ bụrụ n ’ị maghị ego ole ọ ga-ewe ibubata ụgbọ ala gị site na USA gaa United Kingdom, mgbe ahụ anyị nwere ike ịnye ọnụego maka ụgbọ ala gị na - ekpuchi ihe niile site na mkpokọta na ndebanye aha na United Kingdom.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-achọ echiche ọjọọ banyere ihe ọ ga-efu mgbe ahụ, afọ ụgbọ ala na-arụ nnukwu akụkụ na ọnụahịa ibubata. Taxtụ ụtụ isi bụ nchịkọta mbụ ị ga - eme nke ga - enyere gị aka ịchọpụta ọnụ ahịa ụgbọ ala na-aba na United Kingdom.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ọnụ ahịa iji gbanwee ụgbọ ala na-ebukarị ụgbọ ala ọhụrụ karịkarịrị ndị na-ada n'okpuru afọ iri. Agbanyeghị, ọ bụghị ụgbọ ala ọ bụla si USA bụ otu.
Anyị ebubatala ihe niile site na Ford mustang a ma ama na nke ọhụrụ a na-agbanye nnukwu ụgbọala na ụgbọ ala ọ bụla chọrọ atụmatụ pụrụ iche iji hụ na nnabata dị na United Kingdom.
Y’oburu n’acho onu ogugu zuru oke na nke zuru ezu nke na akowuta usoro esi ebubata ugbo ala gi na USA egbula oge ileta.
Nwere ajụjụ gbasara ibubata ụgbọ ala si Amerịka gaa United Kingdom?
Nwere ike inyere aka na mbubata ụgbọ ala amapụtara ma ọ bụ ụgbọ ala sitere na America ndị dịrịrị na United Kingdom?
Kpamkpam. Anyị na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ụgbọ ala mara mma na maka ọtụtụ ụgbọ ala ndị dịbu na United Kingdom, anyị nwere ike inye aka.
Dabere n'ụgbọ gị, anyị ga-agbanwe okwu anyị kwuru dabere na ụzọ ntinye aha.
Nwere ike inyere aka na ntụgharị ọkụ ọkụ America?
Kpamkpam. Anyị ejiriwo ọtụtụ ụgbọ ala America rụọ ọrụ ma nwee ike ịnye ọkwa dị ka-maka-dị ka.
Anyị ghọtara na ọtụtụ n'ime arịrịọ ahụ sitere na nnukwu akara ndị ahụ edepụtara. Nke bụ ihe mere maka ọtụtụ ugbo ala anyị ga-enye usoro ịgba ume.
Eziokwu bu, odighi ugbo ala abuo. Anyị na-agbanwe ụgbọ ala iji lelee anya na mmetụta ahụ mana ọ na-emekwa ka ha nwee iwu.
Anyị emepụtala ọtụtụ ụzọ dị iche iche bụ ndị pụrụ iche na ụfọdụ anyị. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ụlọ ọrụ ga-ahọrọ ikewa modul ọkụ mgbe ha nwere ike ịgbanwe ihe ngosi gị ka ọ bụrụ amber. Nke a bụ ihe anyị na-eme n'ọnọdụ dị njọ karị, ma ọtụtụ ụgbọ ala nwere ike gbanwee ya na-amasị ya na-enweghị imebi iguzosi ike n'ezi ihe nke nkeji ọkụ ụgbọ ala.
Nwere ike ịnyere aka na ịbubata ọgba tum tum si America?
Anyị ejiriwo ụgbọ ala dịgasị iche iche si America rụọ ọrụ na ọgba tum tum sokwa. Enwere ọtụtụ ihe atụ dị egwu nke ọgba tum tum ndị si America (ọ bụ ezie na ha na-abụkarị nke Harley) anyị nwere ike ịghọta ihe kpatara mgbe ụfọdụ ndị nwe ha na-ebubata ha.
Maka ọgba tum tum, anyị na ụfọdụ n'ime ndị na-ebugharị ọgba tum tum kachasị mma na ụlọ ọrụ iji hụ na enweghị nsogbu.
You na-enye ndụmọdụ na nnyefe nke nnabata ngwa?
Ọ bụrụ na ị na-esi Amerịka kwaga United Kingdom, mgbe ahụ ị nwere ike iji atụmatụ enyemaka ToR iji weta ihe gị na UK. Ebe anyị enweghị ike mezue ụdị ToR1 gị, anyị nwere ike inye aka na ajụjụ ọ bụla inwere.
Anyị na-enyere ọtụtụ ndị ahịa aka kwa afọ ịkwaga na United States na UK.
Biko mara na ọ bụrụ n’ịchọrọ iji ụgbọ ala gị mee njem iji buru ihe onwunwe gị, anyị nwere obi anụrị maka ịme nke a. Anyị ghọtara na ị chọrọ iji ohere kachasị oge mgbe ị na-akwụ ụgwọ maka mbupu ma ị nwere ike ịchekwa nnukwu ego site na ịme ya.
Offer na-enye ọrụ ịzụ maka ụgbọ ala America?
Ọ bụrụ na enwere ụgbọ ala ọkacha mmasị gị nke ị na-azụtabeghị - egbula oge ịbanye.
Site na ahụmịhe ịzụrụ ụgbọ ala ọtụtụ afọ, anyị nwere ike ịnye nduzi na-adịghị ele mmadụ anya n'ihu na usoro ahụ ma weghaa mbubata ụgbọ ala ahụ ozugbo ịzụrụ ya.
Anyị nwekwara ike inyere ụfọdụ aka n'ụgbọala na-atọ ụtọ nke nwere ike isiri anyị ike inweta ma ọ bụ inweta. Biko mara na nke a abụghị ọrụ anyị na-enye maka ụgbọ ala niile ma ọ bụ naanị maka ndị na-azụ ahịa dị oke njọ.
You nwere ike inyere aka n'ịkwụ ụgwọ maka ụgbọ ala na America?
Ọ bụrụ n ’ịzụtabeghị ụgbọ ala ịchọrọ ibubata - kedụ ebe ị na - amalite.
Wepụta oge ma ụgbọ ala ahụ ọ bụ eziokwu. Ọ bara uru isoro ndị na-ere ahịa mara ọpụrụiche ma nwee aha ọma na azụmaahịa moto. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị nọrọla n'America ma na-azụkwa ihe n'ihu gị, ị nwere ike ịnwekwu nnwere onwe karịa onye azụrụ ụgbọ ala ahụ. Ma ọ bụrụ na ị na-azụ ụgbọ ala ahụ na mba ofesi? Jiri ndị ahịa ụgbọ ala tụkwasịrị obi.
Legharịa anya n'ụgbọala ma atụla ụjọ inyocha ihe ndị mara mma banyere ya. Enwela nrụgide ịzụrụ ịzụta oge ahụ na ebe ahụ - dịka enwere ike ịme akụkọ mmebi nke ụgbọ ala nwere ike ịchụpụ gị. Ozugbo ị nwere obi ụtọ na ụgbọ ala ndị America - ọ nwere ike bụrụ aghụghọ iji nweta ọnụahịa kachasị mma n'ihi mgbanwe na ọnụego mgbanwe. Maka ịzụrụ ihe kwa ụbọchị, ọ nwere ike ịme obere ọdịiche na ọnụ ọgụgụ zuru ezu mana mana ịzụrụ nnukwu ego? O nwere ike ịbụ nnukwu ihe dị iche. E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ dịka ndị na-ere ahịa nke ga-enyekarị ọnụego mgbanwe ahịa dị mma na karịa karịa ịsị, ụlọ akụ n'okporo ámá gị.
Egbula oge ịkpọtụrụ gị maka ịzụta ụgbọ ala.
Anyị enwere ike ịnyere aka na mmezigharị ọ bụla ma ọ bụ ọrụ mmezi ọ bụla?
Dabere na afọ nke ụgbọ gị enwere ike ị nweta ọrụ mmezi chọrọ iji kwadebe ya maka okporo ụzọ yana nchekwa.
Anyị na-enye ọrụ ịkwụ ụgwọ. Ndị na-arụ ọrụ igwe anyị nọ na saịtị ma nwee ike inye aka na ntụgharị, ọrụ ndozi, yana arịrịọ ọ bụla pụrụ iche ị nwere.
Ma nke a bụ Corvette oge gboo chọrọ mweghachi zuru oke ma ọ bụ Mustang chọrọ akara breeki ọhụrụ dabara.
Anyị na-achọkarị iche na ọ bụ oge dị mma iji uru nke enweghị ụgbọ gị - ebe ya na anyị nọ, ị nwere ike ịrụ ọrụ ọ bụla ị ga-achọ ịmalite tupu ị bulie ụgbọala ahụ.
Ya mere egbula oge iji nweta ihe ọ bụla pụrụ iche chọrọ.
Anyị nwere ike inye aka ibubata ụgbọ ala pụrụ iche?
Anyị amaghị ma ọ na-eme ka anyị bụrụ ụlọ ọrụ mbubata ụgbọ ala kachasị egwu, mana anyị butere ụgbọ ala ụlọ akwụkwọ otu ugboro. Ha adabaghị na arịa mbupu ka ị mara.
Yabụ ee, anyị nwere ike inye aka ibubata ụgbọ ala dị iche iche na United Kingdom maka gị.
Anyị na ọtụtụ narị ụgbọ ala America arụ ọrụ
Site na ọnụ ọgụgụ dị oke ọnụ na klas na-arụ ọrụ n'oge a
Ndị ahịa anyị atụkwasịla anyị obi n'ụgbọ ala ọhụrụ ọhụụ ka anyị nwee otu ụdị ụgbọala dịka Ford Raptor. Mana anyị anaghị emetụta ụgbọ ala nke oge a, anyị na-ebutekwa ọtụtụ ụgbọ ala na-ebubata kwa ọnwa site na ndị ahịa na-achọ iji uru nke ụtụ ụtụ dị egwu maka ụgbọala ndị toro eto n'akụkụ iwu MOT kachasị ọhụrụ nke na-edebanye aha kpochapụla America. mfe.
Ya mere ma obu ochie ma obu ihe ohuru, egbula oge ibanye na aka.
Deliveredgbọala gị nyefere ebe ọ kwesịrị ịdị.